अादर्श र सरकार प्रतिकाे जन अास्था कमजाेर पार्ने काम भयाे : गाेपाल बुढा - बडिमालिका खबर
अादर्श र सरकार प्रतिकाे जन अास्था कमजाेर पार्ने काम भयाे : गाेपाल बुढा
अार्थिक बिषमता हटाई शाेषित वर्गलाई सशक्त पार्दै उन्नत समाजकाे स्थापना गर्नु नै साम्यवादकाे अनुयायी गर्नु हाे। खै त अाज साम्यवाद नेपाली समाजमा?
धनिहरु अझै धनी हुँदै गय गरिबहरुलाई अझै गरिबिले पिराेलि रहेकाे छ। साझ बिहान छाक टार्न धाै-धाै परिरा छ। याे देशमा बहुमत सहितकाे कम्युनिस्टको सरकार छ , किन अाफ्ना अादर्श र विचारलाई पन्छ्याउन सकिरहेकाे छैन सरकार? अझै मालिक-कमारा प्रथा नेपाली समाजकाे कुनै-कुना-काप्चामा देख्न सकिन्छ !
अाज नेपालि जनताले किन “जनताकाे सरकार हाे” भन्ने अनुभुति गरिरा छैन? जनताले बनायकाे सरकार किन जनतामुखि हुनु सकेन? यावत प्रस्नहरु मनमा खेलि रहन्छ , खेल्न पनि स्वभाबिकै हाे जस्ताे मलाई लाग्छ किनकि म पनि माक्र्सवाद र लेनिनवादकाे समर्थक हुँ।
नेपालमा संघियता लागू भयपछि संघ, प्रदेश र स्थानीयतह गरि तीन भागमा बिभाजन गरियाे । बिभाजन त गरियाे तर त्यति प्रभाबकारि हुन सकेन जस्ताे मलाई लाग्छ।
मानव बिकाश सुचाङ्कमा ७७स्थानमा पर्ने बिकट जिल्ला बाजुरामा मेराे गृह जिल्ला हाे , त्यस माथि जेष्ठ १५ मा ल्याई-सक्नु पर्ने नीति तथा कार्यक्रम अहिले सम्म ल्यायकाे छैन त्यहि मेराे गृहनगर (बुढिगंगा) हाे। अनि जनताले बिकाशकाे के अासा अपेक्षा गर्ने अहिले सम्म नगरमा नीति तथा कार्यक्रम नै प्रस्तुत गर्न सकेकाे छैन। अाज हाम्राे बुढिगंगा नगरपालिका का जनताले बिकाशकाे नाममा बेअर्थकाे राजनितिक हेरिरहनु परेकाे अबस्था छ। तपाईहरुकाे बेअर्थकाे राजनीतिक हैन बिकाश लाई पर्खिरहेका छन् जनता।
नगरमा नीति तथा कार्यक्रम किन अाउन सकिराकाे छैन? नगर प्रमुख भन्नू हुन्छ : नगरका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले जिम्मेवारी बाेध गर्न सकेनन्।
कार्यपालिका सदस्य र वडाअध्यक्ष भन्नू हुन्छ नगर-प्रमुखले जिम्मेवारी वहन गर्न सकेन। अाखिर बुढिगंगाका जनतालाई तपाईहरुकाे अाराेप-प्रत्याराेप हैन बिकाश चाहियकाे छ।
चुनाबि सभालाई सम्बाेधन गर्दै गर्दा :अब जनताकाे घरअागनमा बिकाश लियर अाउछाै भनेर बाेलेका ति शब्दहरु अझै बु न पा का जनताले बिर्सिसकेकाे अबस्था छैन। मन-मुटुमा अझै स्मरण गरिरहेका छन। अब चाडै नगरमा नीति तथा कार्यक्रम अावस्! अाम बुढिगंगाका जनताकाे लागि यहि खुसिकाे कुरा हुने छ। शुभकामना नगर-प्रमुख (दाजु) दिपक बिक्रम शाह ज्यु!
#व्यक्तिगत_बिचार अार्थिक बिषमता हटाई शाेषित वर्गलाई सशक्त पार्दै उन्नत समाजकाे स्थापना गर्नु नै साम्यवादकाे अनुयायी गर्नु हाे। खै त अाज साम्यवाद नेपाली समाजमा? धनिहरु अझै धनी हुँदै गय गरिबहरुलाई अझै गरिबिले पिराेलि रहेकाे छ। साझ बिहान छाक टार्न धाै-धाै परिरा छ। याे देशमा बहुमत सहितकाे कम्युनिस्टको सरकार छ , किन अाफ्ना अादर्श र विचारलाई पन्छ्याउन सकिरहेकाे छैन सरकार? अझै मालिक-कमारा प्रथा नेपाली समाजकाे कुनै-कुना-काप्चामा देख्न सकिन्छ ! अाज नेपालि जनताले किन “जनताकाे सरकार हाे” भन्ने अनुभुति गरिरा छैन? जनताले बनायकाे सरकार किन जनतामुखि हुनु सकेन? यावत प्रस्नहरु मनमा खेलि रहन्छ , खेल्न पनि स्वभाबिकै हाे जस्ताे मलाई लाग्छ किनकि म पनि माक्र्सवाद र लेनिनवादकाे समर्थक हुँ। नेपालमा संघियता लागू भयपछि संघ, प्रदेश र स्थानीयतह गरि तीन भागमा बिभाजन गरियाे ।
बिभाजन त गरियाे तर त्यति प्रभाबकारि हुन सकेन जस्ताे मलाई लाग्छ। मानव बिकाश सुचाङ्कमा ७७स्थानमा पर्ने बिकट जिल्ला बाजुरामा मेराे गृह जिल्ला हाे , त्यस माथि जेष्ठ १५ मा ल्याई-सक्नु पर्ने नीति तथा कार्यक्रम अहिले सम्म ल्यायकाे छैन त्यहि मेराे गृहनगर (बुढिगंगा) हाे। अनि जनताले बिकाशकाे के अासा अपेक्षा गर्ने अहिले सम्म नगरमा नीति तथा कार्यक्रम नै प्रस्तुत गर्न सकेकाे छैन। अाज हाम्राे बुढिगंगा नगरपालिका का जनताले बिकाशकाे नाममा बेअर्थकाे राजनितिक हेरिरहनु परेकाे अबस्था छ।
तपाईहरुकाे बेअर्थकाे राजनीतिक हैन बिकाश लाई पर्खिरहेका छन् जनता। नगरमा नीति तथा कार्यक्रम किन अाउन सकिराकाे छैन? नगर प्रमुख भन्नू हुन्छ : नगरका वडाध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्यले जिम्मेवारी बाेध गर्न सकेनन्। कार्यपालिका सदस्य र वडाअध्यक्ष भन्नू हुन्छ नगर-प्रमुखले जिम्मेवारी वहन गर्न सकेन। अाखिर बुढिगंगाका जनतालाई तपाईहरुकाे अाराेप-प्रत्याराेप हैन बिकाश चाहियकाे छ।
सुदूरपश्चिमका ६२ सय बढिले जिते कोरोना, साढे ११ सय संक्रिय संक्रमित
बाजुरा भीरबाट लडेर एक जनाको मृत्यु